ဝင်းဒိုးခွေများ ဒေါင်းလော့ချရန် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows ခွေများ » ၀င်းဒိုးခွေများ ဒေါင်းလော့ချရန်
By နေမင်းမောင်6:58 AM19 comments
သန်းအေး March 9, 2012 at 8:07 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ..၀င်းဒိုးခွေတွေ စုဆောင်းရတာ ၀ါသနာပါလို့ ဒေါင်းထားလိုက်ပါတယ်..နောက်လည်းထပ်တင်နိုင်ပါစေဗျာ...တစ်ခုလောက်တော့ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် driver resolution ကို အခွေနဲ့ ဘမ်းလို့ရပါသလား..၀င်းဒိုးတင်ပြီး driver တွေကို dvd ခွေနဲ့
အကိုရေ ဂျပန်version window7ခွေရှိရင်တင်ပေးပါ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ
win March 10, 2012 at 1:21 PM
thank u, nay min maung
ွှThankalot bro...
Ko Phyo March 11, 2012 at 12:26 PM
အကို ကျတော်နားမလည်လို့ ဒီကောင်က windowဘာလို့ ခေါ်လဲမသိဘူး ဟို Window7ဒါမှမဟုတ် Xpလား ဒေါင်းတော့ သွားတယ် ၃၂ကို ဒါပေမဲ့ ၃၂နဲ့ ၆၄ကွာခြားချက်လေးတွေကို ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပေးပါလားဗျာ...ဘယ်ဟာက ဘယ်လိုဆိုတာ သိချင်လို့ပါ....အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို...
Ko Phyo March 12, 2012 at 7:20 PM
ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ 94%ရောက်မှ have not been found in serverတဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲ
ဖျက်ရမှာလည်း နှမြော ဒီတိုင်းကျလည်း အ၃မကျဆိုတော့ ဂွကျကျကိုဖြစ်ကရော...
Anonymous March 16, 2012 at 1:17 AM
Thanks alot Ko Nay Min.
lional March 16, 2012 at 7:24 AM
kaung April 8, 2012 at 8:22 AM
အကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော် ဒေါင်းသွားတယ်နော်
aung san July 3, 2012 at 1:10 PM
ကျနော်တော့ဒေါင်းလိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့မတင်တတ်သေးဘူး လေ့လာနေဆဲပါဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနေမင်းမောင်ခင်ဗျား
မင်းချစ်သု July 20, 2012 at 7:47 PM
ကိုနေမင်းမောင် window တင်ပြီးတော.youtube ကနေVIDEOတွေကြည်.မရတော.လို.FASINplyerလဲထည်.ထားတယ်ဗျ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလမ်းညွှန်ပေးပါဦး...
မောင်းသိန်ဖေမြင့် September 2, 2012 at 2:56 PM
အကို ကျတော်နားမလည်လို့ ဒီကောင်က windowဘာလို့ ခေါ်လဲမသိဘူး ဟို Window7ဒါမှမဟုတ် Xpလား အစ်ကို
ညီးအခုမှလေလားနေတဲ့သူပါအစ်ကို တချပ်လောက်ပြောပြလိုရမလာအစ်ကို ကျေဇူတင်ပါတယ် အစဉ်မြဲလေးစာလျှက်ပါအစ်ကိုနေမင်မောင်း ညီးအီမေလ်de1915@hotmail.comပါ။
ညမီးအိမ် November 19, 2012 at 2:38 PM
ညမီးအိမ် November 19, 2012 at 2:49 PM
ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေး December 15, 2012 at 9:59 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုနေမင်းမောင်း ကျတော် ဝင်းဒို ခွေတွေရှာနေတာကြာနေပြီးဗျားလွယ်လွယ် ကူကူ ဒေါင်း လို့ ရတဲ့ နေရာက ပုန်းနေတော့ အခုမှတွေတော့တယ်ဗျာ..ကျတော် ယူသွားလိုက်ပါပြီးခင်ဗျာ...........ဒါပေမယ် ကျတော် မတွေ့ လို့ မေချင်ပါတယ် ဘာ ဝင်းဒိုးခွေလဲလို့ တော့်မသိဘူးဗျား တချက်လောက်ဖြေကြားပေးစေချင်တယ်..ကျတော် ပညာတွေ ဖြေးဖြေးချင်းတိုးတက်လာတာက ကိုနေမင်းမောင်.က ကျတော် ဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူးဗျာ..ထင်တာထက်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေလျှက်ပါဗျားးးးးးးးးးးးးးးးးးး
zawlat February 5, 2013 at 10:27 AM
ကျေးဇူးအထင်းတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီး XP SP 3လေးရရင်လဲလိုချင်ပါတယ်ခင်များ